Dhageyso Xalqada 6-Aad Ee Wareysiyada Maxaabiistii Xabsiga Boosaaso. – Bogga Calamada.com
Dhageyso Xalqada 6-Aad Ee Wareysiyada Maxaabiistii Xabsiga Boosaaso.
Idaacadda Islaamiga Al-andalus waxey idiin soo gudbineysaa silsilado wareysiya ah oo ay la yeelatay maxaabiistii ay Mujaahidiintu kusoo furteen howlgalkii ka dhacay xabsiga ugu weyn ee magaalada Boosaaso 21-kii bisha Rajab sanadka 1442-Hijri.
Maxamed Axmed Cumar waa qof shacab ah oo deegaan ahaan kasoo jeeda gobalka Bari gaar ahaan magaalada Boosaso waxa ay maleeshiyaatka Ashahaado la dirirka Puntland sanadkii 1440-kii hijri oo ku beegan 2019-kii ayey ka qabten bartamaha magaalada Boosaso xilli uu ka yimid machad uu dhiganayay oo ku yaala gudaha Boosaaso.
Maamulka Ashahaado la dirirka Puntland ayaa maxamed axmed cumar dambi uga dhigay inuu isagoo wadada maraya uu indhaha ku gubay sarkaal ka tirsan Puntland oo xilligaas isaga iyo ilaaladiisa ay wadada dhinaceda taagnaayeen.
Jirdil arxan dara ah ugu dambeyntii waxey maxamed ku qasbeen Ashahaado la dirirka Puntland inuu sheegta wax uusan aheen waxeyna ku xukumeen 10 sano oo xabsi ah.
Halkan Ka Dhageyso Xalqada 6-aad Ee Wareysiyada Maxaabiistii Boosaaso.